ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာRayHaber | မီးရထားအဝေးပြေးလေကြောင်းလိုင်းအဝေးပြေးသတင်းနှင့်လေလံကြှနျုပျတို့အကွောငျး
7 နှစ်ပေါင်းမပြတ်မတောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသတင်းသတင်းစာပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရထားလမ်း, ကားလမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို RayHaber ရည်ရွယ်ချက်သတင်းစာပညာ၏နားလည်မှုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ထုတ်လွှင့်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်လက်မှတ် 65 တထောင်သတင်း assign ။ RayHaber ရထားလမ်းမော်ကွန်းတိုက်၏ 65 နှစ်ပေါင်းနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏က်ဘ်ဆိုက် 20 တထောင်သတင်းစာစောင်များနှင့်နေ့စဉ်လေလံပေါ်သတင်းအပြင်ကျနော်တို့ပျမ်းမျှ 60 တထောင်ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်တစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်ကြိုဆိုဂုဏ်ယူကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတူရကီအတွင်းပထမဆုံးတထောင်က်ဘ်ဆိုက်များသို့ဝငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 100 တထောင်နေ့စဉ်ဧည့်သည်များ, အမျိုးသားအဆင့်အတွက်ပထမဦးဆုံး 100 တထောင်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။
မီဒီယာ: web ကို
သတင်း: သတင်း 65.000, 1500 ကဗီဒီယို
ဧည့်သည်: 60.000 အနည်းကိန်း / နေ့
သငျသညျပြည်တွင်းရောက်ရှိနှင့်ပြည်ပကဝက်ဘ် Sitemkar ဤမြေကွက်၌ operating တစျထောငျကုမ္ပဏီများသည်ထက် ပို.5နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်လည်းပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သင့်ကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်လိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ:
2019 Audi A4 သင့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး
LMU 65 ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကားကင်မရာမောင်း mivu
İBB'den şiddetli yağış hakkında açıklama! Metro…
Apaydın, 2.Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi Hakkında…
nahit sai ဟုသူကဆိုသည်:
ဂျပန်ရထားလမ်းစနစ် Faydalanal နည်းပညာ
"တူရကီဥရောပတိုက်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့်ဆက်လက်ရထားလမ်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ " အကယ်. သင်ဤဝါကျဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါသလား
Kleopatra အပေါ်စီးဆက်တိုက်မှန်, သူကိုယျတိုငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအလှဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးထင်ခဲ့တယ်။